Carlo Ancelotti Oo Ka Jawaabay Su'aal Ku Saabsanaa Heshiiska Kylian Mbappe
HomeHoryaalka FranceCarlo Ancelotti oo ka jawaabay su’aal ku saabsanaa Heshiiska Kylian Mbappe
Carlo Ancelotti oo ka jawaabay su’aal ku saabsanaa Heshiiska Kylian Mbappe
January 2, 2022 Horyaalka France, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha 0
Tababaraha kooxda Real Madrid Carlo Ancelotti ayaa ku adkaystay in aanu garanayn in xiddiga kooxda Paris Saint-Germain ee Mbappe inuu ku biirayo kooxda xagaagan.
Qandaraaska xiddiga heerka caalami ee dalka France ee Paris ayaa ku eg dhamaadka bisha June, taasoo la micno ah inuu haatan xor u yahay inuu la hadlo kooxaha ajnabiga ah, Los Blancos ayaana la sheegay inay hogaamineyso loolanka saxiixiisa.
Markii wax laga waydiiyay ku guulaysta koobka adduunka ka hor kulanka Axada ee La Liga ee Getafe, Ancelotti waxa uu sheegay in uu haatan diirada saarayo qaybta dambe ee xilli ciyaareedka 2021-22.
“Ma garanayo,” Ancelotti ayaa u sheegay suxufiyiinta markii la weydiiyay in 23-sano jirkaan uu u dhaqaaqi doono Bernabeu. “Waxaan ka fekereynaa inaan u dagaalano koobab, waa waqti xiiso leh sababtoo ah waxaan u dagaalameynaa LaLiga [Santander], Copa del Rey iyo Supercopa de Espana ayaa sidoo kale bilaabanaya.
“Waa xilli muhim ah, waxa ugu dambeeya ee aan ka fekerayo waa waxa dhici doona 30-ka June.”
Real Madrid ayaa la sheegay inay qorsheynayso inay la soo wareegto labada xidig ee Haaland iyo Mbappe ka hor xilli ciyaareedka 2022-23.